संसारमा सबैभन्दा जनसंख्या भएको देशहरू यात्रा समाचार
संसारमा सबैभन्दा जनसंख्या भएको देशहरू
मारिएला क्यारिल | | सामान्य, हाम्रो बारेमा
महामारीको यस समयमा हामी हाम्रो ग्रहमा बस्ने मानिसहरुको संख्या सम्झना गर्दछौं। यो सँधै यस्तो थिएन, तर पछिल्ला शताब्दीहरूमा विश्व जनसंख्या बढेको छ धेरै र त्यसले ठूलो चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दछ।
विश्वका सब भन्दा बढी जनसंख्या भएका देशहरू चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, ब्राजिल, नाइजेरिया, बंगलादेश, रसिया र मेक्सिको हुन्।। उनीहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र सबैका लागि काम प्रदान गर्नसँग छ। र यो सजिलो छैन। के ठुलो देश अत्यधिक जनसंख्या भएको देश हो?
1 देशहरू र जनसंख्या
देशहरू र जनसंख्या
कसैले सोच्न सक्दछ, प्रायः स्वाभाविक नै, जुन ठूलो देश हुन्छ, त्यति नै मानिसहरू त्यहाँ बस्छन्। पहिलो त्रुटि देशको भौगोलिक आकार निवासी वा जनसंख्या घनत्वसँग सम्बन्धित छैन। तसर्थ, हामीसँग म countries्गोलिया, नामिबिया वा अष्ट्रेलिया जस्तै धेरै कम जनसंख्या घनत्वको साथ विशाल देशहरू छन्। उदाहरणका लागि, म Mongol्गोलियामा प्रति वर्ग किलोमीटरमा २.०2.08 बासिन्दाहरूको मात्र घनत्व छ (कुल जनसंख्या 3.255.000,,२XNUMX,००० छ)।
महाद्वीप स्तरमा उही कुरा हुन्छ। अफ्रिका विशाल छ तर यो केवल १ अरब अरब मानिस बसोबास गर्छ। वास्तवमा, यदि तपाईं कम घनत्वका देशहरूको सूची बनाउनुहुन्छ भने, तपाईंले कम से कम १० वटा कम घनत्व अफ्रिकी देशहरू पाउनुहुनेछ। कारण के हो? खैर भूगोल। मरुभूमि यहाँ र त्यहाँ तान्न र जनसंख्या वितरण असम्भव बनाउँदछ। सहारा, यदि आवश्यक छ भने, लगभग सबै लिबिया वा मौरिटानिया उजाड बनाउँछ। उही दक्षिण नामिब मरुभूमि वा कालाहारी मरूभूमि छ।
नामिबले नामिबियाको लगभग पूरै समुद्रीतट ओगटेका छन र कलहारीले पनि यसको क्षेत्रको केही भाग र बोत्सवानाको सम्पूर्ण भाग ओगटेको छ। वा, उदाहरणका साथ जारी राख्दै, उत्तर कोरिया र अष्ट्रेलियामा समान संख्या रहेका बासिन्दाहरू: करीव २ million मिलियन, तर ... अष्ट्रेलियामा जग्गा द्रव्यमान land। गुणा ठूलो छ। बंगलादेश र रसियाको अवस्था पनि त्यस्तै हुन्छ जसको जनसंख्या क्रमशः १63 र १ 145 करोड are० लाख छ, तर तथ्य यो हो कि रूसमा जनसंख्या घनत्व धेरै कम छ।
त्यसोभए यसलाई स्पष्ट पार्नुहोस् देशको आकार र त्यहाँ बस्ने व्यक्तिको संख्या बीच कुनै अनिवार्य सम्बन्ध छैन। तर यहाँ सूची छ विश्वमा most सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देशहरू।
मलाई अझै पनी याद छ केही वर्ष पहिले म चीनको बारेमा लेख्दै थिएँ जब सरकारले जनगणना गरिरहेको थियो। जबकि अन्य देशहरूमा यो काम एक दिनमा सम्पन्न हुन्छ, कठिन हो, तर एक दिन अन्त्यमा, यो धेरै दिनसम्म चल्यो। आज चीनमा १,1.439.323.776,, XNUMX२,, .XNUMX। बासिन्दाहरू छन्। बीस बर्ष पहिले यो अलि सानो थियो, करीव १,२1.268.300,,13.4०० निवासी। यद्यपि यो दुई दशकहरूमा यसले १ XNUMX..XNUMX% को औसत बढ्यो यो आशा गरिन्छ कि २०2050० सम्ममा यो थोरै घट्ने छ र दुई आंकडा बीच छ।
हामीले माथि भनेझैं चिनियाँ सरकारको ठूलो चुनौती भनेको शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य र काम प्रदान गर्नु हो ती सबैलाई। के चिनियाँहरू इलाकाभरि राम्रो वितरण गरिन्छ? हैन, धेरै देशको पूर्वी आधामा बस्छन् र राजधानी बेइजि inमा मात्र १ and लाख मानिस छन्। राजधानीको पछाडि श Shanghai्घाई, ग्वाzhouझाउ, शेन्जेन, चong्गकिन्ह र वुहान छन्, कोविड १ emerged को उदय भएको कुख्यात सहर।
चीन मा जनसंख्या को बारे मा सबै भन्दा चाखलाग्दो डाटा हो जनसंख्या वृद्धि दर ०. 0,37% छ (त्यहाँ प्रति हजार बासिन्दा १२.२ जन्म र deaths मृत्यु छन्)। यहाँ आयु 75.8 ...XNUMX बर्ष छ। हामीलाई याद गर्नुहोस् कि 1975 मा एक बाल नीति जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रणको उपायको रूपमा (गर्भनिरोधक र कानुनी गर्भपात), र त्यो काफी सफल भएको छ। केहि समयको लागि, उपाय केही सर्तहरूको अन्तर्गत आराम गरीएको छ।
विश्वको दोस्रो सबैभन्दा जनसंख्या भएको देश भारतको साथ हो १,1.343.330.000०,००० बासिन्दाहरू। उत्तरका हिमालहरू र उत्तर पश्चिमी मरुभूमिहरूमा बाहेक मानिसहरू देशका धेरैजसो भागमा वितरण गर्दछन्। भारतसँग २,2.973.190 XNUMX,, १ XNUMX ० वर्ग किलोमिटर सतह छ र नयाँ दिल्लीमा केवल २२,22.654 बासिन्दाहरू छन्। जनसंख्या वृद्धि दर १.२1.25% छ र जन्म दर हो १ .19.89 ..XNUMX per प्रति हजार बासिन्दाहरू जन्म। जीवन प्रत्याशा मुश्किल मात्र छ २,67.8,००० वर्ष।
भारतको सबैभन्दा ठूला शहरहरू करिब २० करोडको साथ मुम्बई, १ Calc,20०० संग कलकत्ता, चेन्नई, बंगलोर र हैदराबाद छन्।
पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका देशहरूको कुल जनसंख्या र तेस्रोको बीचमा ठूलो भिन्नता छ। संयुक्त राज्य अमेरिका एक जनसंख्या भएको देश हो तर यति धेरै छैन। यो 328.677२XNUMX thousand हजार मानिसहरु छन् र विशाल बहुमत पूर्व र पश्चिम तटहरु मा केन्द्रित छन्।
विकास दर ०.0.77% मात्र हो जन्म दर १ thousand..13.42२ प्रति हजार व्यक्ति हो। देशका सबैभन्दा ठूला शहरहरू न्यू योर्क हुन् जहाँ where and लाख मानिसहरू बसोबास गर्छन्, लस एन्जलसको झण्डै आधा, शिकागो, ह्युस्टन र फिलाडेल्फिया। आयु लम्बाइ 88.6 XNUMX..XNUMX बर्ष हो।
के तपाईंलाई थाहा छ इन्डोनेसिया एकदम धेरै जनसंख्या भएको देश हो? तिनीहरू बसोबास गर्छन् 268.074 व्यक्ति। यो पनि छ संसारमा सबैभन्दा जनसंख्या भएको शहर: जाभा। इन्डोनेसियाको क्षेत्र 1.811.831 वर्ग किलोमीटर छ। जन्म दर प्रति हजार व्यक्ति १ 17.04.०XNUMX जन्म हो र आयु लम्बाइ 72.17२.१XNUMX बर्ष हो।
जाभा बाहेक सब भन्दा बढी जनसंख्या भएको शहरहरू सुराबाया, बन्डु,, मेदान, सेमरांग र पालेमबाang हुन्। त्यो याद गर्नुहोस् इन्डोनेसिया एक द्वीपसमूह हो दक्षिण पूर्व एशियामा। भूमध्यरेखीय वरपर करिब १ 17 हजार टापुहरू, छ हजार मानिस बसोबास गर्छन्। सब भन्दा ठूला टापुहरू सुमात्रा, जाभा, बाली, कालिमान्टन, सुलावेसी, नुसा तेg्गगारा टापुहरू, मोलुकास हुन्। पश्चिम पापुआ र न्यु गिनियाको पश्चिमी भाग।
त्यहाँ संसारको सब भन्दा बढी जनसंख्या भएको शीर्ष world मा अर्को अमेरिकी देश छ र यो ब्राजिल हो। यो जनसंख्या २१०,२210.233.000.०० मिलियन छ र तिनीहरू मध्ये धेरै अटलान्टिक महासागरको तटमा बस्छन् किनकि क्षेत्रको राम्रो हिस्सा ज good्गल हो।
ब्राजिल क्षेत्र 8.456.511११ वर्ग किलोमीटर छ। जन्म दर हो १ thousand..17.48 प्रति हजार मानिस जन्म र जीवन प्रत्याशा हो 72 वर्ष। देशका सब भन्दा ठूला शहरहरू साओ पाउलो, रियो दि जेनेरियो, साल्भाडोर, बेलो होराइजन्टे, रेसिफे र पोर्टो एलेग्रे हुन्। ब्राजील विशाल छ र दक्षिण अमेरिकाको एक राम्रो भाग कभर गर्दछ। वास्तबमा यो महाद्वीप मा सबै भन्दा ठूलो देश हो।
यी in वटा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका देशहरू हुन्, तर त्यसपछि पाकिस्तान, नाइजेरिया, बंगलादेश, रूस र मेक्सिको पर्छ। सूचीमा अगाडि जापान, फिलिपिन्स, इथियोपिया, इजिप्ट, भियतनाम, कo्गो, जर्मनी, इरान, टर्की, फ्रान्स, थाइल्याण्ड, युनाइटेड किंगडम, इटली, दक्षिण अफ्रीका, तान्जानिया, म्यानमार, दक्षिण कोरिया, स्पेन, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना, अल्जेरिया, युक्रेन ...
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » संसारमा सबैभन्दा जनसंख्या भएको देशहरू
पोर्तुगाल को सर्वश्रेष्ठ
युरोपको क्यापिटलहरू जुन तपाईंले भ्रमण गर्नुपर्नेछ